Global Voices teny Malagasy » Nahazo ny Fankatoavana Nilaina ny Teny Swahili, Fiteny Faharoa Be Mpiteny Indrindra eto Afrika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2017 10:41 GMT 1	 · Mpanoratra Laila Le Guen Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Kenyà, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Raha tombanana ho manana mpiteny miisa  100 tapitrisa , ny Swahili no fiteny faharoa be mpampiasa indrindra ato amin'ny kaontinanta Afrikana, aorian'ny teny Arabo. Na izany aza, tsy mbola vonona ara-barotra ny tolotra toy ny famantaran-teny mandeha ho azy (ASR) amin'ity fiteny ity, izay manilika ny mpiteny azy azy maro manana fahasembanana sy ireo tsy mahay mamaky ny torohay ilain-dry zareo indrindra amin'ny fiainany andavanandro. Mety hiova tsy ho ela anefa izany, satria hiray dia hanome teknolojia voafaritra ho an'ny mpiteny Swahili ny fikarohana akademika sy ny aingavaon'ny teknolojia.
Eo an-dalam-panatontosana ny iray amin'izany zava-baovao tena azo antenaina indrindra ny ao Kenya. Ny Uliza  (midika hoe “manontania” amin'ny teny Swahili) dia lasitra famnataran-teny mamela ireo mpisera mba hahazo vaovao avy amin'ny Aterineto amin'ny alàlan'ny fampiasana ny finday tsotra.
Mety ho azo iainan'ny teny hafa manana mpiteny betsaka ny maodely Uliza. Fa tsy izany anefa no mitranga ho an'ny ankamaroan'ireo fiteny miisa 2.000 ampiasaina ato amin'ny kaontinanta Afrikana . Kanefa mety ho tonga avy amin'ny tetikasam-pikarohana  notarihin'i Preethi Jyothi tao amin'ny Ivontoerana Beckman ny vahaolana, izay ahitana ekipa mpikaroka mampiasa fomba mamadika ny mety ho dikantsoratra ny feo avy amin'ireo tsy tompon'ny teny. Rehefa mety tsara ilay fomba mamadika ny mety ho dikantsoratra, dia manokatra ny lalana ivoahan'ny ASR ho an'ireo fiteny tsy be mpampiasa, amin'ny vidiny azo iafiana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/25/97223/
 mpiteny miisa: http://swahililanguage.stanford.edu/